သင်စိတ်ရောဂါဖြစ်ချင်နေပြီလို့ ဒီအချက်တွေက ဖော်ပြနေ | LANSONE - မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးသော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာ နေရာ (ဖိုရမ်)
Home Forums > Health and Beauty > Help with Your Health >
သင်စိတ်ရောဂါဖြစ်ချင်နေပြီလို့ ဒီအချက်တွေက ဖော်ပြနေ
Discussion in 'Help with Your Health' started by Zar Ni Nyein Tun, Dec 19, 2017.
လူအများစုဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိပဲ သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ အရာတွေကို မသိတတ်ကြပါဘူး။
ဒီလို အရာထဲမှာ စိတ်ရောဂါလဲ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မပြောင်းလဲပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတော့ ကြုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကျန်းမာရေးပြောင်းလဲမှု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်အခြေအနေကို အားမလိုအားမရဖြစ်တာနဲ့ လက်ရှိဘဝမှာ ဆိုးရွားတဲ့မပျော်ရွှင်မှုမျိုးကြုံတွေ့ရင် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဟာလည်း စိတ်ကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်လာစေပါတယ်။သင်က ပထမပိုင်းမှာတော့ စိတ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်တာ သတိထားနိုင်ပေမယ့် သက်တမ်းရင့်သွားရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကို သတိမထားမိတော့ပါဘူး။
အနီရောင်အဆင့် စိတ်ကျဆင်းရောဂါဟာ ဆိုးရွားပြင်းထန်ပါတယ်။ဒါကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး အနေအထားအရ လူ သန်းပေါင်း 350 လောက် ဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာကို ကြုံနေရပြီး သူတို့ဟာ ဝမ်းနည်းလွယ်တာ၊အလွန်အမင်းအိပ်စက်တာနဲ့ စကားနည်းလာတာဆိုရင် စိတ်ရောဂါရဲ့ ခြေလှမ်းအစဆီရောက်ရှိနေပါပြီ။
တစုံတခုဟာ ကြောက်စရာမကောင်းပါပဲ အကြောင်းမဲ့ကြောက်လန့်တာမျိုး ကြုံနေတာ၊စိုးရိမ်ပူပန်မှု လွန်ကဲနေတာတို့ဆို သင့်ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းချက်ရှိနေပြီး အိပ်ရေးပျက်တာမျိုးသာ ဆက်တိုက်ကြုံရမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုတွေ မူမမှန်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မကြာခဏဆိုသလို သင်ဟာ အတိတ်မှတ်ဥာဏ်ထဲ အလည်သွားတာ၊အတိတ်က ရနံ့တွေ အတိတ်ကပုံရိပ်တွေကို တိတိကျကျ ပြန်ခံစားနေရတာနဲ့ ပြောင်းလဲမှု အသစ်သစ်တွေပေါ်မှာ နာကျင်တာ၊ခံစားရတာ လက်မခံနိုင်ဖြစ်ရတာမျိုး ရှိနေရင် အတိတ်မှာနေထိုင်ချင်တဲ့ စိတ်ရောဂါမျိုး ကြုံတွေ့ခံစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Marlon Murray from Wilmington was looking for popular custom essay proofreading websites au
Terence Shaw found the answer toasearch query popular custom essay proofreading websites au
14th amendment essay killamockingbird ukulele
choose topic my res
DerikFlus, Jul 12, 2019
Kamplergy New Member
Ah, thanks for the link Matt. Forgot about that post.
I see... Well, I happen to have about 13 or so accounts and was wondering what alls on. Thanks anyway.
Kamplergy, Aug 10, 2019